Sidee ugu suura gashay Aftab asigoo caruur ah inuu Amitabh la saaxiibo? – Filimside.net
Sidee ugu suura gashay Aftab asigoo caruur ah inuu Amitabh la saaxiibo?
April 14, 2019 Ali Aadan
Aftab Shivdasni waa mid kamid ah atoorayaasha loogu jecel yahay gudaha Soomaaliya si weyn waliba waxuuna jaceylkan ka kasbaday bilawgii qarnigaan markuu sameeyay filmo jaceyll soo jiidasho leh.
Mega Star Amitabh Bachchan ayaa sheegay in Aftab yahay saaxiibkiisa caruurnimada taaso dadkaqaar suaal inee is weydiyaan noqotay ileen labadan shaqsi farqi weyn ayaa u dhaxeya da’ahaan balse Big B sheekada dhan kale ayuu ka waday sidee dadka u fahmeen mooyee.
Aftab waxuu wax ka jilay 2 film oo Amitabh Bachchan hogaamiye ka ahaa kuwaaso kala ah Shahenshah iyo Insaniyat waliba waxuu ku jilay doorka Amitabh Bachchan oo yar micnaha Big B kahor inta uusan soo weynaanin ama muuqaalkiisa rasmiga shaashada la hor imaanin ayuu Aftab jilay Amitabh oo yar.
Sidaa aawged Aftab iyo Amitabh xili hore ayeeba saaxiib noqdeen xili Aftab caruur ahaa maadama uu aflaam badan caruurnimadiis kasoo muuqday sida Mr.india oo kale waxaana farxad ugu filan inuu shaashada kujilay Big B oo yar xili uu isaga si rasmi ah u yaraa.
Waxaa Aqrisay 641